Icala elifanelekileyo le-Ipad - Geofumadas
Uhambo lwam lokugqibela lunyanzelise ukuba lwamkele ngokutshintsha i-Ipad ngokungathandabuzekiyo, phakathi kwesibindi sokuphuma kwimoto kwimbaleki yeeyure ze-11, ubushushu bokuhamba ngenqanawa iiyure ze27 ngenxa yeAeromexico -yintoni intlekele-ukukhangeleka ngokuchazwa ngumhlobo osele enam ngokuqinisekileyo. Ekugqibeleni ngaphambi kokuphela konyaka ndigqibile ukukrola amatye abuzwa nge rosette ngesisu kwaye ndicofa iapile emhlophe ebiphupha ngasemva, phantsi ...
Uloyiko lwam lwalukwimibuzo enye ekhutshwe yi-geeks, i-I-widex ehluphekayo (ukubizwa okufanayo ngesiNgesi) Kwintsasa yokuqala waphumelela uthotho lokugculelwa nokugxeka abantu abaninzi bacinga ukuba yenye yeempazamo zokuqala zikaMac. Emva kweveki yokuyidlula, nantsi imbambano yokuba kutheni ndenze isigqibo sokungayibuyiseli:
1 YiApple. Ngokuqinisekileyo esi sisizathu. yomelele kuba i-Ipad ithengise kakhulu, kuba ezinye iiprototypes zaye zenza ukuba zikhuphisane kwaye zizuze iikhilomitha (kunye nexabiso). Kodwa yi-Mac, kwaye kwiinyanga nje ezimbalwa kukho amawaka eenkqubo ezivela kwiinkampani ezinkulu nezincinci eziphuhlisa i-Ipad -simahla kwaye sihlawulwe-.
Ndiyayithanda i-Lenovo Ideapad hybrid enamandla okusebenza njengeLaptop kunye nokuhlangana njengethebhulethi kodwa ngaphaya koqwalaselo lwabahlobo baka MundoGeek, Ndiyakukholwa ukuba uyifumana evenkileni (nase-estore). Iyothusa le Isiseko seHP, eneekhamera ezimbini, i-usb, ipeni yedijithali kunye neminye imimangaliso kodwa ngaphandle kwento yokuba iHP luphawu oludumileyo emhlabeni, elektroniki Akunjalo, kwaye ukuba ufuna ukuthenga enye yezo zinto zokudlala kufuneka uyenze eUnited States, eLondon, isixeko esikhulu okanye ulinde iiveki ezimbalwa ukuba ifike. Kodwa ezi zinto zokudlala zinqweneleka geek, abazithengayo kuba boyiswa ngokunyanzelwa kwaye oku kuqondwe kakuhle nguMac osasaze iivenkile zabo phantse naphi na, apho unokubona khona, uchukumise kwaye uthenge kwi-Ipod nano elula ukuya kwiMacbook Air.
1 Ayisiyiyo iphone. Abaninzi babuza ukuba kujongeka ngathi zi-Ipod ezihlangeneyo, kwaye bagxeka ukuba yayilinye inqaku elinye. Kodwa ngelixa kuyinyani ukuba ezo zinto zisebenzayo ziyafana, izicelo azisoze zabakho. Ke masingalindeli ukuba i-Ipad ibe neefowuni, ayisiyonto leyo.
Bona i umboniso I-900 ibonisa umboniso wokuqala kwi Microstation evumela ukuba uhambe ngaphakathi kwesityalo esineeetyhubhu ezininzi kunye neevali endiyeke zandoneliseka kakhulu. Jonga kwakhona i-AutoDesk mva nje buyela emva kwi-Mac Ngayo yonke ibhetri yoyilo. Kwaye ukuba izicelo ze-GIS / CAD aziyi kulinda, kuba ekugqibeleni oku kuya kuvumela ukubonisana ebaleni ukuyeka ukuba lula uhlengahlengiso kwaye ube yinto yokunxibelelana kwi-Intanethi nedatha; Into ithebhulethi sele ilungile. Ziya kuba yile nto iP PDA ayinakuze ibe yiyo ngenxa yezizathu zobukhulu -ukuba kule meko kubalulekile-.
2 Ayisiyo ilaptop. Ayinayo indawo yokubeka i-USB, akukho khamera, akukho ikhibhodi ebonakalayo eyakhelweyo. Ayinayo enye yale. Kuba akuyiyo ilaptop. Yenziwe ukuba isebenze efini, yiyo loo nto yonke into ineqhosha lokuthumela ngeposi, yiyo loo nto uhlala ujonga inethiwekhi engenazingcingo, yiyo loo nto i-3G isebenza ngokucacileyo nangoku Latitude Kukubeka kwimephu kanye apho ukhoyo.
Nangona abo bangaqhelanga ukwenza ikhibhodi ebonakalayo, kukho izinto zokudlala ezenza kube yimifanekiso entle ukubhala ngokukhululekileyo.
Well ke yintoni?
3 Yincwadana ebizayo. Izicelo zeofisi zixabiso eliphantsi, ngokubanzi baya kwiidola ze-5; Ukhuphiswano kwaye uyahambelana neOfisi kwaye kwiimeko ezininzi eziphezulu. Ke ngomsebenzi oqhelekileyo awunyanzelekanga ukuba ube nexhala, kuya kufuneka ufunde ukukrola njengesixhobo kunye nokuqonda izinto ezithi zihanjiswe yiOfisi kodwa ngendlela efanayo kwaye nomtsalane ngakumbi wenza ukuba amaphepha (uLizwi), amanani (i-Excel) neKeynote (iPowerpoint) ).
Uninzi lwezicelo zifuna ukubuyisela into esiyenzayo nge-ajenda yokuba ngoMeyi ingasenamaphepha, iincwadana ezine ekufuneka zilayishwe emva kwemini ukuya eyunivesithi, ilaptop apho kufuneka ubone i-imeyile yonke imizuzu ye-30, incwadi yokubhalela Imizobo yasimahla.
Ngamafutshane, ngu-a igajethi. Lolunye uhlobo lwento oluza kutshintsha indlela esenza ngayo izinto, nangona ilula iminyaka emva koko kwafunwa nguBill Gates, ngokuvuthwa kunye nesitayile. Kanye njengokuba uNokia wasifundisa ukuthumela umyalezo ngomnwe omnye, iMac isifundisa ukuba siyenze ngomnwe nangezikhonkwane.
Umsi omkhulu we-Apple, kunye nepaneli ye-Itunes yonke into yenziwe. Ukusuka apho uhlelo lwenkqubo yokusebenza luhlaziywa, ngalo lonke ixesha ixhumaxhuma yenza ubhekisele kuphela kwimeko. Kuya kufuneka ubhale kwaye uwa onke amaqhosha anemibala ukuba awuzilawuleli ngexesha elifutshane ubeke i-34 yeedola kwikhadi kwimiba ongayi kuhlala kuyo.
Akukho xesha lokuwubuza, kuba ziya kuba zininzi kakhulu izicelo njengoko zinokubakho amashishini. Ukuba ukuba iyakuba multitasking, ngumbandela wokulinda inguqulelo entsha ye-OS, ukuba siya kuba ne-Chrome ye-Ipad, yehlisa umoya, izolile, yeyiphi into efanelekileyo kukuba uthenge i64 GB eneWifi + 3G ngaxeshanye kuba ayizukutshintsha chassis, kuya kubakho kuphela umthamo ongaphezulu kunye neqokobhe elifanayo. Iphupha elingenakwenzeka ngePC.
Okwangoku intombi yam indishiya ndothukile yimizobo ayenzayo nge-AutoDesk Sketchbook Pro, unyana wam wathenga uSpongeBob ngezantsi kweBikini ngemali yakhe yaseFama. Malunga nejellyfish Kwaye ndi ... TeamViewer ukusebenzisa i-desktop yePC, skype y Facebook ukwenza ishishini, Izahluko ukugqiba ukubhala incwadi yam, Qaphela iTaker ukubhala phantsi / ukuzoba phantse ngayo yonke into, WordPress kwi-geofumar ... kwaye ulinde ukuba ilifu liye ezantsi kwi-CAD / GIS application.
Abanye ... ngokuqinisekileyo musa ukuhlala kwi-Ipad.
Post edlulileyo«Edlulileyo ... bexakeke kodwa bevuya
Post Next I-AutoCAD WS, eyona nto ibhetele kwi-AutoDesk kwiwebhuOkulandelayo "